Mkpochapu osisi na-eme ka okpomoku zuru uwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Mkpochapụ osisi so na-eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-akawanye njọ
Dika onu ogugu mmadu na abawanye, otua ka ichoro: otutu ulo choro, ulo ndi ozo, akwukwo ozo, otutu mmiri, nri ndi ozo, na otutu ihe ndi ozo. Iji mezuo ya, a họrọla ya ọtụtụ afọ ka oke ohia, otu akpa ume nke becausewa n’ihi na ha na-amịkọrọ ikuku carbon dioxide ma na-ebute ikuku oxygen n’ime ikuku, nke anyị maara bụ ikuku anyị kwesiri iku ume ma, ya mere, ịdị ndụ.
Mkpochapụ osisi so na-eme ka okpomoku nke ụwa na-akawanye njọ. Ma, Kedu?
Nnyocha abụọ e bipụtara na magazin sayensị bụ Science na-ekpughe nke ahụ igbutu osisi na-eme ka elu ikuku dị elu karịa ka anyị siri chee na mbụ. Nke mbụ n’ime ha, site na Institute for the Environment and Sustainability nke European Commission’s Joint Research Center (JRC), kọwara oke ohia na-emetụta ike mmiri na mmiri n’etiti ala na ikuku, dịka ọ na-eme na mpaghara ndị a. ebe okpomọkụ.
N'okwu nke abụọ, nke onye nyocha Kim Naudts si na Laboratory nke Climate na Environmental Sciences kwadebere na Pierre Simon Laplace Institute (France) na ndị otu ya, egosiri na ọ bụ ezie na mkpuchi osisi na Europe na-aba ụba, eziokwu ahụ bụ naanị ụfọdụ ụdị »na-ebute mmetụta dị egwu na - eweta ọghọm». Kemgbe afọ 2010, mmadụ mmadụ na-achịkwa oke ohia nke 85% nke Europe, mana ụmụ mmadụ nwere ikike maka ndị nwere uru azụmaahịa ka ukwuu, dị ka pine na beech. Oke ohia ejirila 436.000km2 belatara kemgbe 1850.
Mgbanwe nke okpomọkụ n'ihi enweghị njikwa osisi.
Idochi oke ohia lush na ohia conife emeela mgbanwe na evapotranspiration na albedo, ya bu, oke ike nke anyanwu nke aputara na mbara igwe. Mgbanwe ụfọdụ na-eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-akawanye njọ. Dị ka ndị dere si kwuo, Igwe ihu igwe kwesiri iburu n'uche njikwa ala, tinyere mkpuchi ya, nke mere na amuma ka zie ezi.
Na-enweghị osisi mmadụ enweghị ohere, yabụ Ọ dị mkpa ka ewere usoro ndị dị mkpa ka ha wee ghara ibi na mbara ọzara ọ fọrọ nke nta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mkpochapụ osisi so na-eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-akawanye njọ
Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na Spain